19 août 2019 – Trinitera Malagasy
19 août 2019 Njara Pascal Comments 0 Comment
Ezekiela 28, 1-10/Det 32, 26-36Mpitsara 6, 11-24/Salamo 84Md Matio 19, 23-30 Ny mahantra no handova ny fanjakan’ny Lanitra, ary tsy afaka ny hanompo an’Andriamanitra sy Mamôna miaraka isika. Izay mitoky amin’ny hareny ka manadino an’ilay Loharanon’ny soa rehetra dia tsy afaka ny hiditra ao amin’ny fanjakan’ny Eokaristia: fisaorana sy fiderana. Tsy fitanisana ny soa…
Ezekiela 24, 15-24/Det 32, 18-21Mpitsara 2, 11-19/Salamo 105Md Matio 19, 16-22 Mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny mahantra dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Izany no lalam-pahalavorariana mitondra any amin’ny fiainana mandrakizay atoron’i Jesoa antsika. Izay te ho zanaka marina manko, ka afaka mandova ny Fianana dia tsy afaka ny tsy hizara amin’ny…